ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ပို့ဆောင်ရေး၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ ဆောက်လုပ်ရေးနှင့် စက်မှု လက်မှုရေးရာကော်မတီမှ သုံးခွမြို့နယ်နှင့် ခရမ်းမြို့နယ်ရှိ လမ်း၊တံတားများဆောင်ရွက်နေမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကွင်းဆင်းခြင်း – Yangon Hluttaw
Home / ကျောမတီ/ကျောမရှငျမြား၏ သတငျးမြားး / ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ပို့ဆောင်ရေး၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ ဆောက်လုပ်ရေးနှင့် စက်မှု လက်မှုရေးရာကော်မတီမှ သုံးခွမြို့နယ်နှင့် ခရမ်းမြို့နယ်ရှိ လမ်း၊တံတားများဆောင်ရွက်နေမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကွင်းဆင်းခြင်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ပို့ဆောင်ရေး၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ ဆောက်လုပ်ရေးနှင့် စက်မှု လက်မှုရေးရာကော်မတီမှ သုံးခွမြို့နယ်နှင့် ခရမ်းမြို့နယ်ရှိ လမ်း၊တံတားများဆောင်ရွက်နေမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကွင်းဆင်းခြင်း
Ygn Editor May 29, 2019	ကျောမတီ/ကျောမရှငျမြား၏ သတငျးမြားး, ကျောမတီ/အဖှဲ့ / အသငျး, ဒုတိယအကွိမျ (၂၀၁၅-၂၀၂၀)2Comments 103 Views
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ပို့ဆောင်ရေး၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ ဆောက်လုပ်ရေးနှင့် စက်မှုလက်မှု ရေးရာကော်မတီကော်မတီသည် ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ၊ ကျေးလက်လမ်းဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန၊ တံတားတည်ဆောက်ရေး အဖွဲ့မှ ဆောင်ရွက်နေသော သုံးခွမြို့နယ်နှင့် ခရမ်းမြို့နယ်ရှိ လမ်းပိုင်းများဖြစ်သည့် လက်ပန်ကျိုး-အောင်သာဒန်းလမ်း-သရောဘုတ်ကျေးရွာဆက် ကျောက်ချောလမ်းနှင့် သရောဘုတ်တံတား တည်ဆောက်ခြင်း၊ အုန်းပင်စုမြေသားလမ်း လုပ်ငန်းများအား မြေပြင်ကွင်းဆင်းကြည့်ရှုရာတွင် ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသက်ထွန်းဝင်း၊ အတွင်းရေးမှူး ဦးဝေဖြိုးဟန်နှင့်ကော်မတီဝင်များ၊ လမ်းဦးစီးဌာန၊ ကျေးလက်လမ်း ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနနှင့် တံတားတည်ဆောက်ရေး အဖွဲ့တို့မှ တာဝန်ရှိသူများ လိုက်ပါဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်။
ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီးလှတျတျော ပို့ဆောငျရေး၊ ဆကျသှယျရေး၊ ဆောကျလုပျရေးနှငျ့ စကျမှုလကျမှု ရေးရာကျောမတီကျောမတီသညျ ဆောကျလုပျရေးဝနျကွီးဌာန ၊ ကြေးလကျလမျးဖှံ့ဖွိုးရေးဦးစီးဌာန၊ တံတားတညျဆောကျရေး အဖှဲ့မှ ဆောငျရှကျနသေော သုံးခှမွို့နယျနှငျ့ ခရမျးမွို့နယျရှိ လမျးပိုငျးမြားဖွဈသညျ့ လကျပနျကြိုး-အောငျသာဒနျးလမျး-သရောဘုတျကြေးရှာဆကျ ကြောကျခြောလမျးနှငျ့ သရောဘုတျတံတား တညျဆောကျခွငျး၊ အုနျးပငျစုမွသေားလမျး လုပျငနျးမြားအား မွပွေငျကှငျးဆငျးကွညျ့ရှုရာတှငျ ကျောမတီ ဥက်ကဋ်ဌ ဦးသကျထှနျးဝငျး၊ အတှငျးရေးမှူး ဦးဝဖွေိုးဟနျနှငျ့ကျောမတီဝငျမြား၊ လမျးဦးစီးဌာန၊ ကြေးလကျလမျး ဖှံ့ဖွိုးရေးဦးစီးဌာနနှငျ့ တံတားတညျဆောကျရေး အဖှဲ့တို့မှ တာဝနျရှိသူမြား လိုကျပါဆောငျရှကျခဲ့ကွပါသညျ။
Previous Shenzhen Baishi Investment Co.,Ltd မှ တာဝနျရှိသူမြားနှငျ့တှဆေုံ့ဆှေးနှေး
Next ဘဏ္ဍာရေး၊ စီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးကော်မတီမှ ကုက္ကိုဝ ရေပေးဝေရေးစီမံကိန်း၊ လဂွန်းပြင်ရေပေးဝေရေး စီမံကိန်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တာဝန်ရှိသူများနှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု
We absolutely love your blog and find nearly all of your post’s to be exactly what I’m looking for. Does one offer guest writers to write content to suit your needs? I wouldn’t mind producingapost or elaborating on many of the subjects you write regarding here. Again, awesome weblog!